Mmegharị njem nwoke na nwanyị na ịgba akwụna: Kedu ebe nchekwa dị mma?
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmelite nke Njem njem » Mmegharị njem nwoke na nwanyị na ịgba akwụna: Kedu ebe nchekwa dị mma?
Na-agbasa News Travel • Akụkọ gbasara Costa Rica • Akụkọ kacha ọhụrụ na Dominican Republic • Akụkọ kacha ọhụrụ na Indonesia • Akụkọ na -agbasa ozi Japan • Akụkọ na -agbasa ozi Netherlands • News • Akụkọ na -agbasa na Singapore • Akụkọ na -agbasa na Spain • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a • Akụkọ na -agbasa Ukraine • Akụkọ dị iche iche • Akụkọ na -agbasa na Venezuela
Mmekọahụ maka njem mmekọahụ - Erotic Museum
Fọdụ ndị njem na-eme atụmatụ n'ụzọ pụrụ iche iji mezuo agụụ mmekọahụ ha. Kpọọ ya ezumike ezumike, ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Ha na-arọ nrọ inwe ntụrụndụ acha uhie uhie na-atụ anya erotic ịhịa aka n'ahụ nka.
Enweghị ihe ọ bụla dị njọ na nke ahụ ma ọ bụrụhaala na onye njem na-a toa ntị na nsọpụrụ nke ndị ọrụ mmekọahụ. Echiche nke ndị na-enwe mmekọahụ kwesịrị ịbụ inye ha nsọpụrụ kwesịrị ha. Ndị njem ga-ezere mmerụ ọ bụla gbasara ịzụ mmadụ ma ọ bụ ihe omume metụtara ụmụaka na-enwe mmekọahụ.
N'ikwu ya, olee ebe ndị nchekwa ga-eri na njem njegharị? Ná mba ụfọdụ, ndị na-ahụ maka inwe mmekọahụ na-enwe nchebe nke ndị ọrụ mmanye iwu. N’iburu nke a n’uche ma chọọ ebe kachasị mma njem njem nlegharị anya iji tụlee, lee 10 ị ga - etinye na listi ahụ:
Thailand nwere ụfọdụ obodo ebe mmekọahụ njem nleta na-akwalite udiozi. Obodo ndị ahụ na ndị ọrụ mmekọahụ na-ejupụta, dị ka Pattaya na Bangkok Red Light Distrikti. N'ezie, Bangkok abụrụla okpueze dị ka isi obodo kachasị nwee mmekọahụ na ụwa.
N'ikwu eziokwu banyere ọtụtụ njem nlegharị anya nke mmekọahụ, a na-akpọ ya ndị ọrụ mmekọahụ paradaịs. Enwere ụmụ nwanyị ndị dị njikere ịgbanwe ọrụ ha maka nnukwu ego ndị njem. Nke a ziri ezi na ọ nweghị nsogbu ikwu na enwere nwoke na nwanyị na-enwe mmekọahụ n'akụkụ ọ bụla nke Bangkok.
Ma ọ bụ iwu? N'ezie, mba. Iwu obodo anaghị anabata njem njem nwoke na nwanyị ma ọ bụ ịgba akwụna. Otú ọ dị, ọ bụ nke ndị uwe ojii na-achịkwa ya, gọọmentị na-eleghara ụlọ ọrụ nwoke na nwanyị anya n'ihi ọtụtụ nde dollar na-akpata GDP mba.
Na Singapore, ọrụ nwoke na nwanyị bụ ihe iwu kwadoro dị ka iwu nwere ike ịbụ nke iwu na-achịkwa ya, mana ndị uwe ojii na-enyocha arụmụka na-adịghị mma metụtara ịkwa iko. N'ihi nke a, a na-arụkarị ọrụ mmekọahụ na ịkwụ ụgwọ ya n'azụ ụzọ.
Ọ bụ ezie na ịgba akwụna nwere ike ịbụ ihe iwu, pimp na brothels abụghị ihe iwu. A na-eji ndị uwe ojii mechie anya ha - nke a yiri ka ọ bụ isiokwu a na-ahụkarị na ụlọ ọrụ nwoke na nwanyị n'agbanyeghị mba - mana ụlọ mmekọahụ ndị ama ama ga-ele anya nke ọma iji hụ na enweghị mpụ na ogige ahụ.
Singapore bụ mba na-enye nnwere onwe maka akwụna ka ọ na-azụ ahịa nke aka ya n'ụlọ nke aka ya ma ọ bụ ụlọ ya n'ebe ndị ama ama dịka Geylang Road, Orchard, Decker Road, na Keong Saik Red Light District. Ha nwekwara ike ime ya na ebe obibi ha ma ọ bụ na họtel ndị ahịa.
Ndị akwụna ga-enwerịrị nyocha ahụike iji chọpụta STD ma ha ga-ebu akwụkwọ na-ekwupụta na ha abụghị ndị na-ebu ọrịa ọ bụla na-ebute site na mmekọahụ.
Dominican Republic bụ nnukwu mmadụ na njem nwoke na nwanyị, ee ee, ọ bụ iwu ma ọ na-abịa n'okpuru nchebe nke ndị mmanye iwu. Mana dịka Singapore, mmadụ enweghị ike ịgba akwụna iji nweta ego n'aka ndị na-edina nwoke ma ọ bụ ndị ọzọ. Onye na-enwe mmeko nwoke ga enweta ego n'onwe ya.
Na DR, ndị ọrụ mmekọ nwoke na nwanyị nwere ike ịbụ ndị ọrụ na-anaghị akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na ha chọrọ. Enwekwara ohere itinye aka na mmekorita nke ndi nwoke na nwanyi na ebe a maara dika ndi di elu.
Na Ukraine, a maara Kiev na Odessa dịka obodo ndị a kacha amasị mmasị inwe mmekọahụ na obodo ahụ. Mmegharị njem nwoke na nwanyị bụ ihe iwu na-akwadoghị ebe a, mana enweghị nnukwu nnyonye anya na iwu. Obodo abụọ a nwere klọb warara na ụlọ ịhịa aka n'ahụ na-awasa ebe niile.
Ndị njem mmekọ nwoke na nwoke na Ukraine mere ka ọ bụrụ isi ịghara ịhapụ ịga na Kiev na Odessa ebe ha nwere ike mejupụta agụụ mmekọahụ ha site n'enyemaka nke ụmụ nwanyị na ụmụ nwoke Ukran.
Mpaghara ọkụ na-acha uhie uhie na-ewu ewu na Japan bụ n'okporo ámá Roppongi na Tokyo. Mana enwere njem ịchụso njem na mba a.
Ọ bụ ezie na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị njem mba ofesi na Japan, ụmụ nwanyị na-akwa iko n’ezie enweghị mmasị n’ebe ụmụ nwoke ala ọzọ nọ. Womenmụ nwanyị Japan na-ekwenye na ụdị mmekọahụ nke ụmụ nwoke si mba ọzọ chọrọ siri ike na nye ha na nke a adịghị mma.
Tinyere nke ahụ, ha anaghị enwe isi anụ ahụ nke ndị mba ọzọ ma chọpụta na mgbochi asụsụ bụ igbochi itinye aka ha iji mejuo agụụ mmekọahụ nke onye ahịa.
You maara na pasent 10 nke ndị niile na-aga Costa Rica na-aga ebe ahụ maka mmekọahụ? Gịnị mere mba a ji mara ewu ewu? Ọnụahịa ndị ahụ ọ dị mma? Ndị ọrụ ahụ ọ bụ naanị aka ọrụ a?
Ọfọn, ikekwe, mana ọ kachasị n'ihi na United States nke America, ịgba akwụna bụ iwu na-akwadoghị, na Costa Rica adịghịkwa anya.
N'ezie, ọtụtụ ndị kwabatara na United States na-akwa iko na Costa Rica ruo ihe ruru 80 pasent.
Na Venezuela, ụmụ nwanyị nwere akparamagwa kachasị oke ọnụ na-eme ka ha chịkọta ezigbo ịma mma mara mma n'ụwa. Nke a bụ eziokwu na ọnụ ọgụgụ ụmụ nwanyị Venezuela ndị nwetara aha Miss World.
N'ebe a, ịgba akwụna bụ ihe iwu kwadoro, na ọrụ mmekọahụ bụ ụkpụrụ, ọkachasị na Caracas. Obodo a na-enwe ọrụ ndị iduga na-eme ka ndị njem nwee mmekọahụ.
A na-enwe brothels ebe a yana ụlọ ịhịa aka agụụ mmekọahụ na spa ịhịa aka n'ahụ mmekọahụ.
Spain nwere ihe niile mmadụ nwere ike ikwu - mmanya, ịlụso ehi ọgụ, na ịgba akwụna iwu. Mpaghara ọkụ na-acha uhie uhie na Spain bara ụba ma na-arụ ọrụ.
Ọbụna n'obodo ebe enweghị mpaghara ọkụ ọkụ, nwoke na nwanyị na-edina nwoke ma ọ bụ nwanyị nwere ike ịchọta akwụna dị njikere inye ha ọrụ maka ezigbo ego.
Indonesia nwere aha ọjọọ maka ịzụ ahịa ụmụaka, yabụ dụrụ ndị njem mmekọahụ ka ha kpachara anya banyere ebe ha hụrụ ahụmịhe mmekọahụ.
Ikekwe ụzọ kasị dịrị mma ịchọta mmekọahụ na Indonesia bụ iji .ntanetị. E nwere mgbanaka nke ịgba akwụna na ebe a na-agba akwụna nke onye njem na-enwe mmekọahụ nwere ike ịnweta site na mgbasa ozi.
Na Gili na Bali, a na-ekwupụtaghị na-eme njem nlegharị anya na ebe a - ọ bụ iwu na-akwadoghị - yabụ na-adụ ọdụ.
Ugbu a Amsterdam maara nke ọma maka Red Light Distrikti. N’ebe a, ịgba akwụna bụ ihe iwu zuru oke ma dịkwa nchebe. Ọbụna ha nwere akụkụ nke ebe nrụọrụ weebụ ha raara nye Red Light Distrikti.
Mmadu obula nwere ike gaa zuo ahia n’ime mmadu n’onwe ya site na ịgaghari n’elu ulo ndi ahu ma lee ndi na-akwa iko na windo.
E nwekwara ebe a na-edebe ihe banyere ebe a na-edebe ihe nkiri banyere mmekọahụ, ebe ndị njem ndị na-edina nwoke na nwanyị nwere ike isi mụta ihe ọhụrụ ọhụụ banyere anụ ahụ ụtọ.
akwụna mmekọahụ mmekọahụ njem